Football Khabar » यी हुन् ला लिगामा वर्ष २०२० का टप–५ गोलकर्ता खेलाडी
स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत वर्ष २०२० का खेल आज रातिबाट सकिएका छन् । वर्षको अन्तिम खेल ओसासुना र अलाभेसले खेलेपछि यस वर्षका सबै लिग खेल सकिएका हुन् । ला लिगामा २०२० भरिमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी को–को हुन् ? कसले कति गोल गरे ? यहाँ लिग गोलको तथ्यांक राखिएको छ ।
जारी सिजन बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी अझैसम्म खराब स्थितिबाट गुज्रिरहे पनि वर्षभरिको कूल गोलमा उनी नै सबैभन्दा अघि छन् । उनले ला लिगामा २०२० मा जम्मा १९ गोल गरे, जुन अन्य कुनै पनि खेलाडीको भन्दा धेरै हो । सर्वाधिक लिग गोलमा मेस्सी दोस्रो स्थानका जेरार्ड मोरेनो (भिल्लारियल) भन्दा मात्रै १ गोलले अघि रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति १६ पुष २०७७, बिहीबार २२:१८